MITI Bhizinesi kutangazve kuGuam nejekiseni rakabatanidzwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Zimbabwe Breaking News » MITI Bhizinesi kutangazve kuGuam nejekiseni rakabatanidzwa
nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Zimbabwe Breaking News • Health News • nhau • Taiwan Kupwanya Nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Iko hakuna nzvimbo iri nani pasirese yekuitisa musangano kana mubairo uri wekubaiwa jekiseni. Guam inoiwana uye inogamuchira yekutanga MICE boka revane zana vanosvika kubva kuTaiwan kumahombekombe ayo.
Kuuya kweVIP nemumhanzi weGuam uye vatungamiriri vevashanyi veGVB vakagamuchira yekutanga Misangano, Incentives, Kokorodzano uye Exhibitions (MICE) boka kubva kuTaiwan nezuro ku Won Pat International Airport. Iri boka raive chikamu chechitsuwa chinozivikanwa pasi rose chirongwa cheMweya V&V.
ADATA Technology Co, Ltd. yakatsigira vanopfuura zana revashandi vayo kuti vashanyire Guam nesarudzo yekubaiwa jekiseni. Iyo kambani ndeyekuTaiwanese memory uye yekuchengetedza mugadziri iyo yaiverengerwa senyika yechipiri pakukura muDRAM module modhi ine musika kukosha kwe $ 100 mamirioni.
Kutsigirwa kwevashandi veADATA kwaisanganisira nendege, pekugara muhotera, uye zvinomanikidzwa zvega zvega zvekubhadhara mari pavanodzokera kunyika yavo. ADATA yakurudzirawo vashandi vayo kukoka nhengo dzemhuri kuti dzizotora chikamu murwendo urwu runokurudzira.
"Tinofara zvikuru kugamuchira boka iri, uye tinoda kutenda ADATA nekusarudza Guam senzvimbo yavo yavanoda," akadaro GVB Mutungamiri & CEO Carl TC Gutierrez. "Uyu muenzaniso wakanakisa wekuti chirongwa chedu cheAir V&V chiri kubatsira sei vanhu nemakambani anoda kufamba zvakachengeteka nesarudzo yekubaiwa jekiseni nekuzorora muparadhiso yechitsuwa."
ADATA nhengo yeboka inosvika kuGuam ichitamba kumimhanzi yemuno
Boka reADATA, iro rakasvika neEVA Air charter ndege, iri kugara kuHyatt Regency Guam neThe Tsubaki Tower kwemazuva mana.
Mavhiki maviri apfuura chirongwa pakati peTaiwan neGuam chakatangwa chevashanyi ku receive mushonga panguva yezororo mukati ino yakanaka US ndima muPacific Ocean.
Nezve Mhepo V&V
Chirongwa cheMweya V&V chakagadziridzwa neGuam Visitors Bureau kukurudzira avo vane makore gumi nemaviri zvichikwira kuti vatore mushonga weCOVID-12 vachiri pazororo kuGuam. Vatori vechikamu vanogona kusarudza kubva pakufamba uye kwekushanya mapakeji akagadzirwa mukubatana pamwe nekutengeserana kwekufamba kweGuam, hotera, uye vekurapa. Chirongwa ichi chakaitirwa kusvetuka indasitiri yekushanya yeGuam ichiratidza mweya unodziya weHafa Adai uye mutsa wevanhu veGuam.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve Air V&V chirongwa, enda ku kushanyaguam.com/airvv kana email [email inodzivirirwa].
Pasi rose rakasiyana-siyana LGBTQ + yekufambisa magazini ...